Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo si kulul ugu jawaabay Culimada – Kismaayo24 News Agency
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo si kulul ugu jawaabay Culimada
by admin 4th December 2019 4th December 2019 0178
Iyadoo ay maalmahaan socotay dood ka dhalatay hadal uu jeediyay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur kaas oo uu kaga hadlayay dumarka iyo wax tarkooda ayaa siyaasiga waxaa ay culimada Soomaaliyeed usoo jeediyeen in uu beeniyay Xadiis laga wariyay Nabigeena Muxamed Scw.
Cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa jawaab kabixiyay doodaas iyo eedeynta loo jeediyay wuxuuna yiri ‘Waxaan baraha bulshada ku arkay fal celin laga sameeyey khudbad aan kula hadlay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Jarmalka ku nool, gaar ahaan qayb aan ku daafacayey kaalinta haweenka ee dhanka siyaasadda iyo bulshada. Falcelinta waxay u badnayd mid togan, waxaase jirta qayb si taban looga falceliyey.
Haweenkeena Allaha guuleeyo, garaad iyo diin midna lama dheera”
Jawaabta uu Cabdiraxmaan cabdishakuur bixiyay ayaa timid kadib markii qaar kamida culumida Soomaaliyeed ay siyaasiga ka dalbadeen in uu towbad keen sameeyo maadaama bay dheheen aad beenisay xadiis nabigeena scw laga wariyay.
Kooxda Al-Shabaab oo ‘la wareegtay’ deegaan ku yaalla dalka Kenya.
Booliska Somaliya oo dad u qabtay Dilal ka dhacay Muqdisho
Wasaarada Cadaalada Jubbaland oo Shaqoyin cusub haysa..
Daawo: Shiinaha oo puntland usoo gacan galiyay mid kamid ah hogaamiyeyaasha burcad badeedda oo lagu magacaabo…..
Tifaftiraha K24 6th May 2017 6th May 2017